Bio – Alpha Premium
Michael Collins (1996) (Free ႀကည့္ခ်င္သူမ်ား app ကေနတိုက္၇ုိက္ႀကည့္လို႔ရပါတယ္) ##unicode အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Drama/War အမျိုးအစား Rating 7.1 ရရှိခဲ့တဲ့ 1996 ခုနှစ်ထွက် ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ Title ကတော့ " Michael Collins " ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကတော့ အိုင်ယာလန် ပြည်တွင်းစစ်ကာလ၊ တော်လှန်ရေးကာလအတွင်း UK ဘက်ကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်တဲ့ တော်လှန်ရေးသမား မိုက်ကယ်ကောလင်းအကြောင်း ရိုက်ကူးထားတာပါ။ ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာတော့ အိုင်ယာလန်သမ္မတနိုင်ငံဖြစ်လာဖို့ အိုင်ယာလန်ပြည်သူ/ပြည်သား၊ တော်လှန်ရေးသမားတွေရဲ့ ရင်းနှီးပေးဆပ်ခဲ့ရတဲ့ အသက်၊သွေး၊ချွေးတွေ၊ UK ရဲ့လက်အောက်မှ ကွဲထွက်ပြီး သမ္မတနိုင်ငံဖြစ်လာဖို့ အသက်များစွာရင်း ကာ ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့ရပုံတွေ၊ နိုင်ငံကိုအရင်ကယ်ဖို့ စာချုပ်အတိုင်းသဘောတူညီကာ မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန်ကို ရင်းပြီး ကိုယ်ပိုင်အစိုးရအုပ်ချုပ်ခွင့်ရ လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတော် ဖြစ်လာဖို့ မိုက်ကယ်ကောလင်းရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုတွေနဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကြားက သဘောထားကွဲလွဲမှုကြားက ထွက်ပေါ်လာတဲ့ နောက်ဆက်တွဲရလဒ်တွေကို ကြည့်ရှုခံစားကြရမှာပါ။ အိုင်ယာလန်သမိုင်း‌ကြောင်းကို ဒီဇာတ်ကားလေးနဲ့မတင်းတိမ်နိုင်သူများအ‌နေနဲ့လည်း မိုက်ကယ်ကောလင်းရဲ့အကြောင်းများနဲ့အတူ အိုင်ယာလန်ပြည်တွင်းစစ်ကာလ၊ တော်လှန်ရေးအခင်းအကျင်းများကို ရေးသားထားတဲ့ မြို့မဆရာဟိန်းရဲ့မိုက်ကယ်ကောလင်းဆိုတဲ့ ဘာသာပြန်စာအုပ်‌လေးကို Google မှာ တစ်ချက်ရှာဖွေကာ လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်နော်။ အားပေးကြည့်ရှုတဲ့ ...
IMDB: 7.2/10 31,159 votes
83 (2022) ##unicode ဒီဇာတ်ကားကတော့ 1983ခုနှစ် ခရစ်ကတ်ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲအနိုင်ရခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယအသင်းရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ sport drama ဇာတ်ကားကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် အိန္ဒိယရဲ့နာမည်ကျော်ခရစ်ကတ်အားကစားသမား ကာပယ်ဒက် ကပ္ပတိန်အဖြစ်ဦးဆောင်တဲ့ အိန္ဒိယခရစ်ကတ်အသင်းဟာ ၁၉၈၃ခုနှစ် လန်ဒန်မှာ ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲကိုသွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရပါတယ် အရင်က ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲကိုတစ်ခါမှမနိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ အိန္ဒိယအသင်းဟာ လန်ဒန်မှာအနှိမ်ခံခဲ့ရတဲ့အပြင် ဆီမီးဖိုင်နယ်ပွဲနေ့ထိတောင်မရောက်ဘဲ အိမ်ပြန်ဖို့ကြိုတင်လက်မှတ်ဖြတ်ထားခဲ့တဲ့အထိပါ ဒါပေမယ့် အသင်းခေါင်းဆောင် ကာပယ်ဒက်ကတော့ သူတို့ဟာအနိုင်ယူဖို့လာတာပါလို့ပြောတော့ အားလုံးကလှောင်ခဲ့ကြပါတယ် အားလုံးရဲ့လှောင်ပြောင်မှုကိုရိုက်ချိုးပြီး အိန္ဒိယအသင်းဟာ ပထမဆုံးပွဲစဉ်မှာပဲအနိုင်ရပြီး အုပ်စုကတတ်ကာ ဆီမီးဖိုင်နယ်ကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ် ဒါပေမယ့် မထင်ထားတဲ့အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ အခက်အခဲရူံးနိမ့်မှုတွေကိုကျော်ဖြတ်ပြီး ကမ္ဘာ့ဖလားရတဲ့အထိ သူတို့ဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့ကြလဲဆိုတာကိုတော့ ဒီဇာတ်ကားမှာစောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီဇာတ္ကားကေတာ့ 1983ခုႏွစ္ ခရစ္ကတ္ကမာၻ႔ဖလားပြဲအႏိုင္ရခဲ့တဲ့ အိႏၵိယအသင္းရဲ႕ ျဖစ္ရပ္မွန္ဇာတ္လမ္းကိုအေျခခံၿပီး႐ိုက္ကူးထားတဲ့ sport drama ဇာတ္ကားေကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္ အိႏၵိယရဲ႕နာမည္ေက်ာ္ခရစ္ကတ္အားကစားသမား ကာပယ္ဒက္ ကပၸတိန္အျဖစ္ဦးေဆာင္တဲ့ အိႏၵိယခရစ္ကတ္အသင္းဟာ ၁၉၈၃ခုႏွစ္ လန္ဒန္မွာ ကမာၻ႔ဖလားပြဲကိုသြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရပါတယ္ အရင္က ကမာၻ႔ဖလားပြဲကိုတစ္ခါမွမႏိုင္ခဲ့ဖူးတဲ့ အိႏၵိယအသင္းဟာ လန္ဒန္မွာအႏွိမ္ခံခဲ့ရတဲ့အျပင္ ဆီမီးဖိုင္နယ္ပြဲေန႔ထိေတာင္မေရာက္ဘဲ အိမ္ျပန္ဖို႔ႀကိဳတင္လက္မွတ္ျဖတ္ထားခဲ့တဲ့အထိပါ ဒါေပမယ့္ အသင္းေခါင္းေဆာင္ ကာပယ္ဒက္ကေတာ့ သူတို႔ဟာအႏိုင္ယူဖို႔လာတာပါလို႔ေျပာေတာ့ အားလုံးကေလွာင္ခဲ့ၾကပါတယ္ အားလုံးရဲ႕ေလွာင္ေျပာင္မႈကို႐ိုက္ခ်ိဳးၿပီး အိႏၵိယအသင္းဟာ ပထမဆုံးပြဲစဥ္မွာပဲအႏိုင္ရၿပီး အုပ္စုကတတ္ကာ ဆီမီးဖိုင္နယ္ကိုေရာက္သြားခဲ့ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ မထင္ထားတဲ့အေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔ အခက္အခဲ႐ူံးနိမ့္မႈေတြကိုေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ကမာၻ႔ဖလားရတဲ့အထိ သူတို႔ဘယ္လိုႀကိဳးစားခဲ့ၾကလဲဆိုတာကိုေတာ့ ဒီဇာတ္ကားမွာေစာင့္ေမွ်ာ္အားေပးၾကပါဦးေနာ္ Review – Hmue File Size – 1.2GB,2.6GB Format…mp4 Quality : 720p ...
IMDB: 7.4/10 21,062 votes
The Champion of Auschwitz (2020) (App only) (free ကြည့်ချင်တဲ့သူတွေလဲ app ကနေကြည့်လို့ရပါတယ်) ##unicode ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဂျာမန်နာဇီစစ်စခန်းမှာဂျာမန်တွေကိုဖျော်ဖြေဖို့အတွက်လက်ဝှေ့ထိုး တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတဲ့ပိုလန်လက်ဝှေ့သမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Tadeusz Teddy Pietrzykowski ရဲ့ အကြောင်းကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ "The Champion of Auschwitz"ဆိုတဲ့ ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် လက်ဝှေ့သမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့တက်ဒီဟာဆိုရင်စစ်စခန်းကိုရောက်လာပြီးတဲ့နောက်အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးခက်ခဲမှုတွေကိုကြုံတွေ့ရပါတယ် သူနဲ့အတူနေထိုင်တဲ့ဂျာနက်ဆိုတဲ့ကောင်လေးကလည်း ကျန်းမာရေးမကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အတွက်ဆေးဝါးရဖို့လည်းလိုအပ်နေပါတယ် ဒီလိုနဲ့ပဲတက်ဒီတစ်ယောက်အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဂျာမန်တွေအတွက် ဖျော်ဖြေရေးဖြစ်တဲ့လက်ဝှေ့ထိုးပြိုင်ပွဲတွေမှာပါဝင်မယ်လို့သဘောတူညီချက်တစ်ခုပြုလုပ်လိုက်ပါတယ် တက်ဒီတစ်ယောက်ပြိုင်ဘက်ကိုအလဲထိုးနိုင်ပါ့မလား စစ်စခန်းထဲမှာဘယ်လိုခက်ခက်ခဲခဲဖြတ်သန်းကြရလဲ ဆိုတာကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ဂ်ာမန္နာဇီစစ္စခန္းမွာဂ်ာမန္ေတြကိုေဖ်ာ္ေျဖဖို႔အတြက္လက္ေဝွ႔ထိုး တိုက္ခိုက္ခဲ့ရတဲ့ပိုလန္လက္ေဝွ႔သမားတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ Tadeusz Teddy Pietrzykowski ရဲ႕ အေၾကာင္းကို႐ိုက္ကူးတင္ဆက္ထားတဲ့ "The Champion of Auschwitz"ဆိုတဲ့ ကားေလးကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ လက္ေဝွ႔သမားတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့တက္ဒီဟာဆိုရင္စစ္စခန္းကိုေရာက္လာၿပီးတဲ့ေနာက္အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆးဝါးခက္ခဲမႈေတြကိုႀကဳံေတြ႕ရပါတယ္ သူနဲ႔အတူေနထိုင္တဲ့ဂ်ာနက္ဆိုတဲ့ေကာင္ေလးကလည္း က်န္းမာေရးမေကာင္းတာျဖစ္တဲ့အတြက္သူ႔အတြက္ေဆးဝါးရဖို႔လည္းလိုအပ္ေနပါတယ္ ဒီလိုနဲ႔ပဲတက္ဒီတစ္ေယာက္အစားအေသာက္နဲ႔ေဆးဝါးရရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ဂ်ာမန္ေတြအတြက္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးျဖစ္တဲ့လက္ေဝွ႔ထိုးၿပိဳင္ပြဲေတြမွာပါဝင္မယ္လို႔သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုျပဳလုပ္လိုက္ပါတယ္ တက္ဒီတစ္ေယာက္ၿပိဳင္ဘက္ကိုအလဲထိုးႏိုင္ပါ့မလား စစ္စခန္းထဲမွာဘယ္လိုခက္ခက္ခဲခဲျဖတ္သန္းၾကရလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ဇာတ္လမ္းထဲမွာဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေပးၾကပါဦးေနာ္ Review – Phyu Sin File Size – 1GB,2.4GB Format…mp4 Quality : 1080p Blu-ray,720p Blu-ray Genre : Bio,Drama,History Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow ==================================================================== App ေဒါင္းရန္ App Link မန်ဘာဝင်လိုသူများ viber – 0969117714
IMDB: 6.5/10 386 votes
Eiffel (2022) ##unicode ပဲရစ်မြို့လို့ပြောလိုက်တာနဲ့အားလုံးအတွေးထဲမှာပြေးမြင်တဲ့အရာကတော့အီဖယ်တာဝါကြီးပါပဲ ဒီတာဝါကြီးဟာဆိုရင်အရမ်းကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားပြီးတော့ကမ္ဘာ့ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ် အခုဒီကားထဲမှာဆိုရင်အီဖယ်တာဝါကြီးဖြစ်ပေါ်လာပုံသမိုင်းနဲ့ ဒီလိုခမ်းနားတဲ့တာဝါကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုတွေလေ့လာခဲ့ရတယ် ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအသေးစိတ်တင်ဆက်ပြသထားပါတယ် ဂူစတက်ဖ်အီဖယ်ဟာဆိုရင်ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးပြပွဲအတွက်မက်ထရိုရထားလမ်းတွေကိုတည်ဆောက်ဖို့ပြင်ထားပေမယ့် အစိုးရရဲ့တောင်းဆိုချက်အရ စစ်ပွဲကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေ ပျက်စီးမှုတွေကိုပြန်လည်အဖတ်ဆည်နိုင်ဖို့အတွက်ပဲရစ်ရဲ့ အထင်ကရထူးခြားပြီးခမ်းနားတဲ့မီတာ ၃၀၀ လောက်ရှိတဲ့တာဝါကြီးကိုပဲဆောက်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ် အီဖယ်တာဝါကြီးကိုလေဒဏ်မိုးဒဏ်ခံပြီး ကြာရှည်တည်တံ့အောင်ဘယ်လိုတည်ဆောက်ခဲ့ကြလဲ ကမ္ဘာ့အထင်ကရနေရာတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ဘယ်လိုကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် ##zawgyi ပဲရစ္ၿမိဳ႕လို႔ေျပာလိုက္တာနဲ႔အားလုံးအေတြးထဲမွာေျပးျမင္တဲ့အရာကေတာ့အီဖယ္တာဝါႀကီးပါပဲ ဒီတာဝါႀကီးဟာဆိုရင္အရမ္းကိုႀကီးက်ယ္ခမ္းနားၿပီးေတာ့ကမာၻ႔ခရီးသြားဧည့္သည္ေတြကိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္တဲ့ေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္ အခုဒီကားထဲမွာဆိုရင္အီဖယ္တာဝါႀကီးျဖစ္ေပၚလာပုံသမိုင္းနဲ႔ ဒီလိုခမ္းနားတဲ့တာဝါႀကီးတစ္ခုတည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ဘယ္လိုေတြေလ့လာခဲ့ရတယ္ ဘယ္လိုအခက္အခဲေတြႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကိုအေသးစိတ္တင္ဆက္ျပသထားပါတယ္ ဂူစတက္ဖ္အီဖယ္ဟာဆိုရင္ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးျပပြဲအတြက္မက္ထ႐ိုရထားလမ္းေတြကိုတည္ေဆာက္ဖို႔ျပင္ထားေပမယ့္ အစိုးရရဲ႕ေတာင္းဆိုခ်က္အရ စစ္ပြဲေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ဆုံးရႈံးမႈေတြ ပ်က္စီးမႈေတြကိုျပန္လည္အဖတ္ဆည္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ပဲရစ္ရဲ႕ အထင္ကရထူးျခားၿပီးခမ္းနားတဲ့မီတာ ၃၀၀ ေလာက္ရွိတဲ့တာဝါႀကီးကိုပဲေဆာက္လုပ္ဖို႔ဆုံးျဖတ္လိုက္ပါတယ္ အီဖယ္တာဝါႀကီးကိုေလဒဏ္မိုးဒဏ္ခံၿပီး ၾကာရွည္တည္တံ့ေအာင္ဘယ္လိုတည္ေဆာက္ခဲ့ၾကလဲ ကမာၻ႔အထင္ကရေနရာတစ္ခုျဖစ္လာဖို႔ဘယ္လိုႀကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့ၾကလဲဆိုတာကိုစိတ္ဝင္စားဖြယ္ၾကည့္ရႈရမယ့္ ဇာတ္ကားေကာင္းေလးျဖစ္ပါတယ္ Review – Phyu Sin File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : Comedy,Drama Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Hmue & Phyu Sin Encoded by Arrow
IMDB: 6.3/10 1,085 votes
The Fog of War (2003) (App member only) ##unicode အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရောဘတ်မက်ဂ်နာရာရဲ့အကြောင်းကိုမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်သဘောမျိုးရိုက်ကူးထားတဲ့ "The Fog of War" ဆိုတဲ့ documentary film လေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီကားထဲမှာဆိုရင်ရောဘတ်မက်ဂ်နာရာရဲ့ဘဝအကြောင်းတွေနဲ့သူကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့စစ်ပွဲတွေအကြောင်းကိုထဲထဲဝင်ဝင် တင်ဆက်ပေးထားတာကိုကြည့်ရှုကြရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီကားလေးဟာဆိုရင် Rating လည်းမြင့်သလိုBest Documentary အဖြစ်လည်းစာရင်းဝင်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ရောဘတ်မက်ဂ်နာရာဟာဆိုရင်ဗီယက်နမ်အရေးမှာစစ်ပွဲတစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သူအဖြစ် အမေရိကန်ပြည်သူတွေကြားမှာနာမည်ကြီးပါတယ် ရောဘတ်မက်ဂ်နာရာဟာဆိုရင်စစ်တပ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပထမဆုံးအရပ်သားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ် မက်ဂ်နာရာဟာအရမ်းကိုထက်မြက်တဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီးကျူးဘားအရေးအခင်းမှာလည်းနယူးကလီးယားစစ်ပွဲမဖြစ်အောင် တားဆီးနိုင်ခဲ့သူပါ ဒါပေမယ့်ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲမှာတော့ အမေရိကန်ကိုစစ်ပွဲထဲဆွဲသွင်းမိတဲ့အပြင် အမေရိကန်စစ်သည်အများစုကိုလည်းကျဆုံးသွားစေမယ့်အမှားကြီးကိုကျူးလွန်မိပါတော့တယ် ဒါတောင်ပြည်သူတွေကိုအသိပေးခြင်းမရှိဘဲဖုံးကွယ်ထားတဲ့အတွက် နိုင်ငံရဲ့ ကောင်းကျိုးပြည်သူ့ရဲ့အကျိုးကိုဆုတ်ယုတ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုပြီးမှတ်ချက်ပေးခံခဲ့ရပါတယ် ရောဘတ်မက်ဂ်နာရာကိုလူတွေမြင်တဲ့အမြင်ကအစစ်အမှန်ဟုတ်ရဲ့လား ရောဘတ်မက်ဂ်နာရာကရောလူတွေရဲ့မှတ်ချက်အပေါ်ဘယ်လိုထင်မြင်လဲ ဖြစ်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေအကြောင်းကိုဘယ်လိုဆွေးနွေးသွားမှာလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမယ့် သမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ် ##zawgyi အေမရိကန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးေရာဘတ္မက္ဂ္နာရာရဲ႕အေၾကာင္းကိုမွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္သေဘာမ်ိဳး႐ိုက္ကူးထားတဲ့ "The Fog of War" ဆိုတဲ့ documentary film ေလးကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ဒီကားထဲမွာဆိုရင္ေရာဘတ္မက္ဂ္နာရာရဲ႕ဘဝအေၾကာင္းေတြနဲ႔သူႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရတဲ့စစ္ပြဲေတြအေၾကာင္းကိုထဲထဲဝင္ဝင္ တင္ဆက္ေပးထားတာကိုၾကည့္ရႈၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္ ဒီကားေလးဟာဆိုရင္ Rating လည္းျမင့္သလိုBest Documentary အျဖစ္လည္းစာရင္းဝင္ထားတာျဖစ္ပါတယ္ ေရာဘတ္မက္ဂ္နာရာဟာဆိုရင္ဗီယက္နမ္အေရးမွာစစ္ပြဲတစ္ခုကိုစတင္ခဲ့သူအျဖစ္ အေမရိကန္ျပည္သူေတြၾကားမွာနာမည္ႀကီးပါတယ္ ေရာဘတ္မက္ဂ္နာရာဟာဆိုရင္စစ္တပ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ပထမဆုံးအရပ္သားတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ပါတယ္ မက္ဂ္နာရာဟာအရမ္းကိုထက္ျမက္တဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီးက်ဴးဘားအေရးအခင္းမွာလည္းနယူးကလီးယားစစ္ပြဲမျဖစ္ေအာင္ တားဆီးႏိုင္ခဲ့သူပါ ဒါေပမယ့္ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲမွာေတာ့ အေမရိကန္ကိုစစ္ပြဲထဲဆြဲသြင္းမိတဲ့အျပင္ အေမရိကန္စစ္သည္အမ်ားစုကိုလည္းက်ဆုံးသြားေစမယ့္အမွားႀကီးကိုက်ဴးလြန္မိပါေတာ့တယ္ ဒါေတာင္ျပည္သူေတြကိုအသိေပးျခင္းမရွိဘဲဖုံးကြယ္ထားတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးျပည္သူ႔ရဲ႕အက်ိဳးကိုဆုတ္ယုတ္ေအာင္လုပ္တယ္ဆိုၿပီးမွတ္ခ်က္ေပးခံခဲ့ရပါတယ္ ေရာဘတ္မက္ဂ္နာရာကိုလူေတြျမင္တဲ့အျမင္ကအစစ္အမွန္ဟုတ္ရဲ႕လား ေရာဘတ္မက္ဂ္နာရာကေရာလူေတြရဲ႕မွတ္ခ်က္အေပၚဘယ္လိုထင္ျမင္လဲ ျဖစ္ခဲ့တဲ့စစ္ပြဲေတြအေၾကာင္းကိုဘယ္လိုေဆြးေႏြးသြားမွာလဲဆိုတာကိုစိတ္ဝင္စားဖြယ္ၾကည့္ရႈရမယ့္ သမိုင္းဝင္မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ကားတစ္ကားျဖစ္ပါတယ္ Review – Phyu Sin File Size – 1.2GB,2.5GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : Documentary,Bio,History Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow ==================================================================== App ဒေါင်းရန္ App Link မန်ဘာဝင်လိုသူများ viber – 09691177142
IMDB: 8.1/10 23,947 votes
Kurup (2021) ##unicode ဒီဇာတ်ကားကတော့ ၁၉၈၄ခုနှစ်ကတည်းကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ အလိုအရှိဆုံးဝရမ်းပြေး SukumaraKurupရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုအခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး rating 8/10တောင်ရရှိထားတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် လေတပ်အရာရှိကနေ ရာဇဝတ်မှုပေါင်းများစွာကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ရာဇဝတ်သားဖြစ်လာခဲ့တဲ့ Kurupရဲ့ဘဝအကြောင်းကို ဒီဇာတ်ကားမှာစိတ်ဝင်စားဖွယ်မြင်တွေ့ရမှာပါ မိဘတွေရဲ့တွန်းအားကြောင့် လေတပ်ထဲကိုဝင်ခဲ့ရတဲ့ Kurupဟာ သေကြောင်းကြံစည်ဟန်ဆောင်ပြီး လေတပ်တစ်ခုလုံးကိုအယုံသွင်းခဲ့ပါတယ် အားလုံးသေသွားပြီလို့ထင်တဲ့အချိန်မှာ Kurupဟာ နာမည်နှစ်မျိုးနဲ့ ဘဝနှစ်ခုကိုနေနေခဲ့ပါတယ် တစ်နေ့မှာတော့ အသက်အာမခံကြေးကိုလိုချင်လို့ ထပ်ပြီးတော့သေချင်ယောင်ဆောင်ဖို့ကြံစည်ခဲ့ပြန်ပါတယ် သူသေသွားပြီလို့ လူတွေထင်အောင် သူ့အရပ်၊ သူ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တူတဲ့အလောင်းကို Kurupရှာပါတော့တယ် အဲဒီနောက် ကားမီးလောင်မှုနဲ့ ထပ်ပြီးတော့သေချင်ယောင်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Kurupကို ရဲအရာရှိတစ်ယောက်က သံသယဝင်သွားမိတဲ့အခါမှာတော့ Kurupရဲ့အလိမ်အညာဇာတ်လမ်းတွေ ဘယ်လိုပေါ်လာမလဲ ဘယ်လိုလှည့်ကွက်တွေနဲ့ Kurupကရှောင်နေဦးမလဲ ဉာဏ်များတဲ့ Kurupမှာ ဘယ်လိုအကြံအစည်တွေရှိလဲဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားမှာကြည့်ရူအားပေးကြပါဦးနော် ။##zawgyi ဒီဇာတ္ကားကေတာ့ ၁၉၈၄ခုႏွစ္ကတည္းကထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနတဲ့ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာ အလိုအရွိဆုံးဝရမ္းေျပး SukumaraKurupရဲ႕ဘဝအေၾကာင္းကိုအေျခခံၿပီး ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ျဖစ္ရပ္မွန္ဇာတ္ကားျဖစ္ၿပီး rating 8/10ေတာင္ရရွိထားတဲ့ဇာတ္ကားေကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္ ေလတပ္အရာရွိကေန ရာဇဝတ္မႈေပါင္းမ်ားစြာကိုက်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ရာဇဝတ္သားျဖစ္လာခဲ့တဲ့ Kurupရဲ႕ဘဝအေၾကာင္းကို ဒီဇာတ္ကားမွာစိတ္ဝင္စားဖြယ္ျမင္ေတြ႕ရမွာပါ မိဘေတြရဲ႕တြန္းအားေၾကာင့္ ေလတပ္ထဲကိုဝင္ခဲ့ရတဲ့ Kurupဟာ ေသေၾကာင္းႀကံစည္ဟန္ေဆာင္ၿပီး ေလတပ္တစ္ခုလုံးကိုအယုံသြင္းခဲ့ပါတယ္ အားလုံးေသသြားၿပီလို႔ထင္တဲ့အခ်ိန္မွာ Kurupဟာ နာမည္ႏွစ္မ်ိဳးနဲ႔ ဘဝႏွစ္ခုကိုေနေနခဲ့ပါတယ္ တစ္ေန႔မွာေတာ့ အသက္အာမခံေၾကးကိုလိုခ်င္လို႔ ထပ္ၿပီးေတာ့ေသခ်င္ေယာင္ေဆာင္ဖို႔ႀကံစည္ခဲ့ျပန္ပါတယ္ သူေသသြားၿပီလို႔ လူေတြထင္ေအာင္ သူ႔အရပ္၊ သူ႔ခႏၶာကိုယ္နဲ႔တူတဲ့အေလာင္းကို Kurupရွာပါေတာ့တယ္ အဲဒီေနာက္ ကားမီးေလာင္မႈနဲ႔ ထပ္ၿပီးေတာ့ေသခ်င္ေယာင္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ Kurupကို ရဲအရာရွိတစ္ေယာက္က သံသယဝင္သြားမိတဲ့အခါမွာေတာ့ Kurupရဲ႕အလိမ္အညာဇာတ္လမ္းေတြ ဘယ္လိုေပၚလာမလဲ ဘယ္လိုလွည့္ကြက္ေတြနဲ႔ Kurupကေရွာင္ေနဦးမလဲ ဥာဏ္မ်ားတဲ့ Kurupမွာ ဘယ္လိုအႀကံအစည္ေတြရွိလဲဆိုတာ ...
IMDB: 8.0/10 5,061 votes
Zero to Hero (App only) (free ကြည့်ချင်တဲ့သူတွေလဲ app ကနေဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်) ##unicode ဒီတစ်ခါ ဟောင်ကောင်မသန်စွမ်းအပြေးသမား So Wa Waiရဲ့ ဘဝအကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ဟောင်ကောင်ဒရာမာဇာတ်ကားကောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီဇာတ်ကားကတော့ မသန်စွမ်းSo Wa Waiရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေ ငယ်ငယ်ကတည်းကလေဖြတ်သွားပြီး အကြားအာရုံပါထိခိုက်သွားတဲ့ သားဖြစ်သူအပေါ်မှာ သူ့အမေရဲ့မေတ္တာတွေ အားပေးမှုတွေကိုကြည့်ရူရမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် So Wa Wai ငယ်စဉ်မှာ လမ်းမလျှောက်နိုင်ကြဘူးလို့ လူတိုင်းကထင်နေကြချိန် သူ့အမေက သူ့ကိုအတင်းလမ်းလျှောက်ခိုင်းခဲ့ပါတယ် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရောက်လာတော့ So Wa Wai အပြေးမြန်တာကိုမြင်ပြီး သူ့သားရဲ့အနာဂတ်ကို အပြေးသမားတစ်ယောက်အဖြစ်ဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ် သားဖြစ်သူ အပြေးလေ့ကျင်တဲ့ကွင်းအပြင်မှာ နေ့တိုင်းသွားစောင့်ပေးတယ် သားနဲ့အတူလိုက်ပြေးပေးတယ် ဒါကြောင့် So Wa Waiဟာ အပြေးပြိုင်ပွဲတွေမှာ On your markဆိုတဲ့စကားအစား On your momလို့ပြောခဲ့တာပါ မသန်စွမ်းသားဖြစ်သူနဲ့ သားကိုသိပ်ချစ်တဲ့အမေ ဘဝအကြောင်းတွေကို ဒီဇာတ်ကားမှာကြည့်ရူအားပေးရမှာပဲဖြစ်လို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ##zawgyi ဒီတစ္ခါ ေဟာင္ေကာင္မသန္စြမ္းအေျပးသမား So Wa Waiရဲ႕ ဘဝအေၾကာင္းကို႐ိုက္ကူးထားတဲ့ ျဖစ္ရပ္မွန္ ေဟာင္ေကာင္ဒရာမာဇာတ္ကားေကာင္းကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ဒီဇာတ္ကားကေတာ့ မသန္စြမ္းSo Wa Waiရဲ႕ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈေတြ ငယ္ငယ္ကတည္းကေလျဖတ္သြားၿပီး အၾကားအာ႐ုံပါထိခိုက္သြားတဲ့ သားျဖစ္သူအေပၚမွာ သူ႔အေမရဲ႕ေမတၱာေတြ အားေပးမႈေတြကိုၾကည့္႐ူရမယ့္ ဇာတ္ကားေကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္ ...
The Electrical Life of Louis Wain (2021) (App only) (free ကြည့်ချင်တဲ့သူတွေလဲ app ကနေဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်) ##unicode Doctor Strange ရဲ့မင်းသားကြီး Benedict Cumberbatch ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ကိုယ်ရေးအတ္ထုပတ္တိဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်တဲ့ "The Electrical Life of Louis Wain" ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် လူဝီဝိန်းဟာ ၁၉ ရာစုနှစ်လောက်ကသူ့ရဲ့ကြောင်ပုံပုံတူပန်းချီတွေနဲ့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ပန်းချီဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် သူ့ရဲ့လက်ရာတွေဟာယခုအချိန်အထိအနုပညာရှင်တွေကြားထဲမှာပြောစမှတ်ပြုပြီး အသိအမှတ်ပြုရလောက်တဲ့အထိကောင်းမွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဒီကားထဲမှာဆိုရင်ပန်းချီဆရာကြီးလူဝီဝိန်းရဲ့ဘဝဖြတ်သန်းပုံနဲ့သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဖြစ်စေခဲ့တဲ့ကြောင်ပုံပုံတူပန်းချီကားတွေကို ဆွဲဖြစ်အောင်ဘယ်လိုအရာတွေကလှုံ့ဆော်လမ်းကြောင်းပေးခဲ့သလဲဆိုတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် လူဝီဝိန်းဟာမောင်နှမသားချင်းတွေထဲမှာအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးအဖေဖြစ်သူဆုံးပါးသွားပြီးနောက်မိသားစုရဲ့တာဝန်ကို တစ်ယောက်တည်းထမ်းရပါတော့တယ် ညီမဖြစ်သူငါးယောက်ကိုရှာဖွေကျွေးမွေးဖို့အတွက်အလုပ်မျိုးစုံလုပ်ရင်းဘဝကိုကျင်လည်နေရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ် နှုတ်ခမ်းကွဲအာခေါင်ကွဲရောဂါကြောင့်ငယ်ငယ်ကတည်းက သာမန်ကလေးတွေလိုကျောင်းသေချာမတက်ခဲ့ရပေမယ့် ပန်းချီပညာရပ်မှာပါရမီပါတဲ့လူဝီဝိန်းအတွက်အလုပ်ကတော့သိပ်ပြီးမခက်ခဲခဲ့ပါဘူး ဒါပေမယ့်သူစိတ်အားထက်သန်တဲ့အရာဟာအစတုန်းကပန်းချီပညာမဟုတ်ခဲ့ဘဲ ပြဇာတ်ရေးတာသာဖြစ်ခဲ့တာပါ ဒါဆိုရင်လူဝီဝိန်းတစ်ယောက်ပန်းချီပညာရပ်လမ်းကြောင်းနဲ့ဘယ်လိုအသက်မွေးဖြစ်ခဲ့လဲ ဘာလို့ကြောင်လေးတွေကိုမှရွေးချယ်ပြီးပုံတူရေးဆွဲဖြစ်သွားတာလဲဆိုတာကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi Doctor Strange ရဲ႕မင္းသားႀကီး Benedict Cumberbatch ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ကိုယ္ေရးအတၳဳပတၱိဇာတ္လမ္းေလးျဖစ္တဲ့ "The Electrical Life of Louis Wain" ဆိုတဲ့ဇာတ္ကားေလးကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ လူဝီဝိန္းဟာ ၁၉ ရာစုႏွစ္ေလာက္ကသူ႔ရဲ႕ေၾကာင္ပုံပုံတူပန္းခ်ီေတြနဲ႔နာမည္ႀကီးခဲ့တဲ့ပန္းခ်ီဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္ သူ႔ရဲ႕လက္ရာေတြဟာယခုအခ်ိန္အထိအႏုပညာရွင္ေတြၾကားထဲမွာေျပာစမွတ္ျပဳၿပီး အသိအမွတ္ျပဳရေလာက္တဲ့အထိေကာင္းမြန္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ ဒီကားထဲမွာဆိုရင္ပန္းခ်ီဆရာႀကီးလူဝီဝိန္းရဲ႕ဘဝျဖတ္သန္းပုံနဲ႔သူ႔ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈကိုျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ေၾကာင္ပုံပုံတူပန္းခ်ီကားေတြကို ဆြဲျဖစ္ေအာင္ဘယ္လိုအရာေတြကလႈံ႕ေဆာ္လမ္းေၾကာင္းေပးခဲ့သလဲဆိုတာကိုေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္ လူဝီဝိန္းဟာေမာင္ႏွမသားခ်င္းေတြထဲမွာအႀကီးဆုံးျဖစ္ၿပီးအေဖျဖစ္သူဆုံးပါးသြားၿပီးေနာက္မိသားစုရဲ႕တာဝန္ကို တစ္ေယာက္တည္းထမ္းရပါေတာ့တယ္ ညီမျဖစ္သူငါးေယာက္ကိုရွာေဖြေကြၽးေမြးဖို႔အတြက္အလုပ္မ်ိဳးစုံလုပ္ရင္းဘဝကိုက်င္လည္ေနရတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္ ႏႈတ္ခမ္းကြဲအာေခါင္ကြဲေရာဂါေၾကာင့္ငယ္ငယ္ကတည္းက သာမန္ကေလးေတြလိုေက်ာင္းေသခ်ာမတက္ခဲ့ရေပမယ့္ ပန္းခ်ီပညာရပ္မွာပါရမီပါတဲ့လူဝီဝိန္းအတြက္အလုပ္ကေတာ့သိပ္ၿပီးမခက္ခဲခဲ့ပါဘူး ဒါေပမယ့္သူစိတ္အားထက္သန္တဲ့အရာဟာအစတုန္းကပန္းခ်ီပညာမဟုတ္ခဲ့ဘဲ ျပဇာတ္ေရးတာသာျဖစ္ခဲ့တာပါ ဒါဆိုရင္လူဝီဝိန္းတစ္ေယာက္ပန္းခ်ီပညာရပ္လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ဘယ္လိုအသက္ေမြးျဖစ္ခဲ့လဲ ဘာလို႔ေၾကာင္ေလးေတြကိုမွေ႐ြးခ်ယ္ၿပီးပုံတူေရးဆြဲျဖစ္သြားတာလဲဆိုတာကိုေတာ့ဇာတ္လမ္းထဲမွာဆက္လက္ၾကည့္ရႈေပးၾကပါဦးေနာ္ Review – Hmue File Size – 2.5GB,1.3GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : Bio,Drama,History Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin & Hmue Encoded by Arrow ==================================================================== App ဒေါင်းရန္ App Link မန်ဘာဝင်လိုသူများ viber ...
The Eyes of Tammy Faye (2021) ##unicode Tammy Fayeဟာ LGBTQအသိုင်းအဝိုင်းကိုထောက်ခံအားပေးခဲ့သူ ခရစ်ယာန်တရားဟောဆရာမဖြစ်ပြီး ဒီဇာတ်ကားကတော့ သူ့ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ ခရစ်ယာန်ရုပ်သံတရားဟောဆရာတွေဖြစ်တဲ့ Tammy Fayeနဲ့ သူ့ရဲ့ခင်ပွန်းသည် Jimရဲ့ ဘဝအတတ်အကျ၊ အောင်မြင်မှု၊ ကျရူံးမှုတွေ ဘာသာရေးကိုအသုံးချပြီး ကိုယ်ကျိုးရှာခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေ၊ စစ်မှန်တဲ့ဘာသာရေးသဘောတရားတွေကို ဒီဇာတ်ကားမှာတွေ့မြင်ရမှာပါ သူ့ဘဝရဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းကလည်း ဒရာမာဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဒီဇာတ်ကားက အားပေးမှုလည်းအတော်ရရှိထားပါတယ် စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်လို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ##zawgyi Tammy Fayeဟာ LGBTQအသိုင္းအဝိုင္းကိုေထာက္ခံအားေပးခဲ့သူ ခရစ္ယာန္တရားေဟာဆရာမျဖစ္ၿပီး ဒီဇာတ္ကားကေတာ့ သူ႔ဘဝရဲ႕အေၾကာင္းကို႐ိုက္ကူးထားတဲ့ ျဖစ္ရပ္မွန္ဇာတ္ကားတစ္ကားပါ ခရစ္ယာန္႐ုပ္သံတရားေဟာဆရာေတြျဖစ္တဲ့ Tammy Fayeနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ခင္ပြန္းသည္ Jimရဲ႕ ဘဝအတတ္အက်၊ ေအာင္ျမင္မႈ၊ က်႐ူံးမႈေတြ ဘာသာေရးကိုအသုံးခ်ၿပီး ကိုယ္က်ိဳးရွာခဲ့တဲ့အေၾကာင္းေတြ၊ စစ္မွန္တဲ့ဘာသာေရးသေဘာတရားေတြကို ဒီဇာတ္ကားမွာေတြ႕ျမင္ရမွာပါ သူ႔ဘဝရဲ႕ျဖစ္ရပ္မွန္ဇာတ္လမ္းကလည္း ဒရာမာဇာတ္ကားေကာင္းတစ္ကားလိုျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဒီဇာတ္ကားက အားေပးမႈလည္းအေတာ္ရရွိထားပါတယ္ စိတ္ဝင္စားဖို႔လည္းေကာင္းတဲ့ဇာတ္ကားျဖစ္လို႔ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ Review – Hmue File Size – 1.2GB,2.4GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : Bio,Drama, History Subtitle : Myanmar Subtitle (softsub) Translated by Phyu Sin,Hmue Encoded by Arrow
IMDB: 7.0/10 1,793 votes
Surviving Compton: Dre, Suge and Michel’le (App member only) ##unicode R&B အဆိုတော် Michel’leရဲ့ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်တတ်တဲ့ အဆိုတော်Rapperယောက်ျားနှစ်ယောက်ရဲ့လက်ထဲမှာ သူ့ဘဝဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရလဲဆိုတာရိုက်ကူးပြထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် Michel’leဟာ စကားပြောရင်ကြွက်သံလေးပေမယ့် သီချင်းဆိုရင်တော့ လုံးဝပြောင်းလဲသွားတဲ့အသံနဲ့ အခုထိသက်ရှိထင်ရှားရှိနေဆဲ နာမည်ကြီးအဆိုတော်ပါ သူ့ရဲ့ပထမခင်ပွန်းသည်က နာမည်ကြီးRapper Dreပါ Dreဟာ N.W.Aအဖွဲ့မှာ အဓိကရက်ပါနဲ့တေးထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး အခုထိလည်း entertainmentတွေပိုင်ဆိုင်ကာ ဂီတလောကမှာရှိနေဆဲပါ N.W.Aအဖွဲ့အောင်မြင်ချိန်မှာ Michel’leဟာ Dreနဲ့တွဲနေခဲ့ပါတယ် သူ့ကိုယ်ပိုင်အယ်ဘမ်ထုတ်ပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့ပေမယ့် Dreရဲ့ကလေးကိုလွယ်ခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာ အနုပညာလောကထဲကနေ တစ်ဖြေးဖြေးပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ် Dre ရိုက်နှက်တဲ့ဒဏ်ကိုခံနိုင်ဖို့ ဆေးတွေသုံး အရက်တွေသောက်ရာက ဆေးသမားဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ် အဲဒီနောက် Dreနဲ့ပြတ်စဲပြီး သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက် Suge Knightဆိုတဲ့ Death Rowတေးထုတ်လုပ်ရေးပူးတွဲတည်ထောင်သူ ရက်ပါနဲ့တွဲခဲ့ပါတယ် Suge Knightနဲ့လည်း သူ အလိမ်အညာခံရခဲ့ပြီးဒုက္ခတွေရောက်ခဲ့ပါတယ် သူ့ဘဝရဲ့အခက်အခဲတွေ အနုပညာလောကထဲကိုပြန်ရောက်လာအောင်ရုန်းကန်ခဲ့ရပုံတွေကိုရိုက်ကူးပြထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်ကားဖြစ်လို့ လက်မလွှတ်တမ်းကြည့်ရူအားပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi R&B အဆိုေတာ္ Michel’leရဲ႕ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္တတ္တဲ့ အဆိုေတာ္Rapperေယာက္်ားႏွစ္ေယာက္ရဲ႕လက္ထဲမွာ သူ႔ဘဝဘယ္လိုအခက္အခဲေတြႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရလဲဆိုတာ႐ိုက္ကူးျပထားတဲ့ ျဖစ္ရပ္မွန္ဇာတ္ကားကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ Michel’leဟာ စကားေျပာရင္ႂကြက္သံေလးေပမယ့္ သီခ်င္းဆိုရင္ေတာ့ လုံးဝေျပာင္းလဲသြားတဲ့အသံနဲ႔ အခုထိသက္ရွိထင္ရွားရွိေနဆဲ နာမည္ႀကီးအဆိုေတာ္ပါ သူ႔ရဲ႕ပထမခင္ပြန္းသည္က နာမည္ႀကီးRapper Dreပါ Dreဟာ N.W.Aအဖြဲ႕မွာ အဓိကရက္ပါနဲ႔ေတးထုတ္လုပ္သူျဖစ္ၿပီး အခုထိလည္း entertainmentေတြပိုင္ဆိုင္ကာ ဂီတေလာကမွာရွိေနဆဲပါ N.W.Aအဖြဲ႕ေအာင္ျမင္ခ်ိန္မွာ Michel’leဟာ Dreနဲ႔တြဲေနခဲ့ပါတယ္ ...
IMDB: 6.7/10 537 votes
Adventures ofaMathematician (2021) (App member only) ##unicode ဒီဇာတ်ကားကတော့ နျူးကလီးယားဗုံးတီထွင်ရာမှာ အဓိကနေရာကပါဝင်ခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သင်္ချာပညာရှင်ရဲ့ဘဝအကြောင်းဖြစ်ရပ်မှန်ကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ် ၁၉၄၂ခုနှစ်မှာ အမေရိကန်အစိုးရက Los Alamosလို့ခေါ်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာ အတော်ဆုံးသိပ္ပံပညာရှင်တွေကိုစုဆောင်းခဲ့ပါတယ် သူတို့ထဲကအများစုက ဥရောပအလယ်ပိုင်းကရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေပါ နာဇီတွေရဲ့အန္တရာယ်နဲ့ ဂျပန်တွေရဲ့နယ်ချဲ့မှုတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့ အမေရိကန်အစိုးရက သူတို့ကို ပထမဆုံးနျူကလီးယားဗုံးထွင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ် အဲဒီပရောဂျက်ကိုတော့ Mahattanပရောဂျက်လို့အမည်ပေးခဲ့ပါတယ် ဒီပရောဂျက်ကို သူတို့ဘယ်လိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ကြလဲ နျူကလီးယားဗုံးကိုတီထွင်ခဲ့ကြသူတွေရဲ့ခံစားချက်၊ ထင်မြင်ချက်တွေ၊ ဂျပန်နိုင်ငံ ဟီရိုရှီမားမြို့ကို ပထမဆုံးနျူကလီးယားဗုံးကြဲတဲ့အခါမှာ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေသေခဲ့ရတဲ့အတွက် ဗုံးတီထွင်သူတွေရဲ့နောင်တတွေကို ဒီဇာတ်ကားမှာမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်လို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ##zawgyi ဒီဇာတ္ကားကေတာ့ န်ဴးကလီးယားဗုံးတီထြင္ရာမွာ အဓိကေနရာကပါဝင္ခဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ သခ်ၤာပညာရွင္ရဲ႕ဘဝအေၾကာင္းျဖစ္ရပ္မွန္ကိုအေျခခံၿပီး႐ိုက္ကူးထားတဲ့ဇာတ္ကားပဲျဖစ္ပါတယ္ ၁၉၄၂ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္အစိုးရက Los Alamosလို႔ေခၚတဲ့ေနရာတစ္ခုမွာ အေတာ္ဆုံးသိပၸံပညာရွင္ေတြကိုစုေဆာင္းခဲ့ပါတယ္ သူတို႔ထဲကအမ်ားစုက ဥေရာပအလယ္ပိုင္းကေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူေတြပါ နာဇီေတြရဲ႕အႏၲရာယ္နဲ႔ ဂ်ပန္ေတြရဲ႕နယ္ခ်ဲ႕မႈေတြကိုအဆုံးသတ္ဖို႔ အေမရိကန္အစိုးရက သူတို႔ကို ပထမဆုံးန်ဴကလီးယားဗုံးထြင္ခိုင္းခဲ့ပါတယ္ အဲဒီပေရာဂ်က္ကိုေတာ့ Mahattanပေရာဂ်က္လို႔အမည္ေပးခဲ့ပါတယ္ ဒီပေရာဂ်က္ကို သူတို႔ဘယ္လိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကလဲ န်ဴကလီးယားဗုံးကိုတီထြင္ခဲ့ၾကသူေတြရဲ႕ခံစားခ်က္၊ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဟီ႐ိုရွီမားၿမိဳ႕ကို ပထမဆုံးန်ဴကလီးယားဗုံးႀကဲတဲ့အခါမွာ အျပစ္မဲ့ျပည္သူေတြေသခဲ့ရတဲ့အတြက္ ဗုံးတီထြင္သူေတြရဲ႕ေနာင္တေတြကို ဒီဇာတ္ကားမွာျမင္ေတြ႕ရမွာပဲျဖစ္လို႔ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ Review – Hmue File Size – 2.4GB Format…mp4 Quality :1080p WED-DL Genre : Drama,Bio Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Hmue Encoded by ...
Thalaivii (2021) ##unicode ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ကိုယ်ရေးအတ္ထုပတ္တိသဘောမျိုးရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့အိန္ဒိယဖြစ်ရပ်မှန်ကားလေးကိုတင်ဆက်ထားပါတယ် ဒီကားထဲမှာဆိုရင်တမီးလ်နန်ဒူရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲ ၆ ကြိမ်တိုင်တိုင်အနိုင်ရပြီး ၁၄ နှစ်ကျော်လောက်အထိ အုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ J. Jayalalithaa ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးလောကရဲ့နာမည်ကြီးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ အကြောင်းကိုရိုက်ကူးတင်ပြထားပါတယ် ဂျာရာဟာရုပ်ရှင်မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သာမန်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ တစ်နေ့မှာတော့ပြည်သူအားလုံးရဲ့အချစ်တော်နာမည်ကြီးမင်းသား MJR နဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရင်းချစ်ကြိုက်သွားကြပါတယ် ဒါပေမယ့် MJR ဟာနိုင်ငံရေးလောကထဲကိုဝင်ပြီးနောက်သူ့ရဲ့ပုံရိပ်ထိခိုက်မှာစိုးတဲ့အတွက်ဂျာရာနဲ့လက်တွဲဖြုတ်ခဲ့ပါတော့တယ် နိုင်ငံရေးကြောင့်သူတို့ချစ်သူနှစ်ယောက်ကွဲရတာလို့ယုံကြည်နေတဲ့ဂျာရာက နိုင်ငံရေးကိုအလွန်မုန်းပါတယ် ဒါပေမယ့်လည်း MJR ဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပါတီနေရာကိုယူဖို့ဖြစ်လာပါတော့တယ် ဂျာရာတစ်ယောက်ယောက်ျားတွေနဲ့ရင်ဘောင်တန်းပြီး ဝန်ကြီးချုပ်နေရာကိုခက်ခက်ခဲခဲယူရဖို့ ပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရပုံတွေကိုအသေးစိတ်ရိုက်ကူးပြထားတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ် ##zawgyi ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ ကိုယ္ေရးအတၳဳပတၱိသေဘာမ်ိဳး႐ိုက္ကူးတင္ဆက္ထားတဲ့အိႏၵိယျဖစ္ရပ္မွန္ကားေလးကိုတင္ဆက္ထားပါတယ္ ဒီကားထဲမွာဆိုရင္တမီးလ္နန္ဒူရဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ၆ ႀကိမ္တိုင္တိုင္အႏိုင္ရၿပီး ၁၄ ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ J. Jayalalithaa ဆိုတဲ့ႏိုင္ငံေရးေလာကရဲ႕နာမည္ႀကီးအမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အေၾကာင္းကို႐ိုက္ကူးတင္ျပထားပါတယ္ ဂ်ာရာဟာ႐ုပ္ရွင္မင္းသမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ႀကိဳးစားေနတဲ့သာမန္မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ပါ တစ္ေန႔မွာေတာ့ျပည္သူအားလုံးရဲ႕အခ်စ္ေတာ္နာမည္ႀကီးမင္းသား MJR နဲ႔႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးရင္းခ်စ္ႀကိဳက္သြားၾကပါတယ္ ဒါေပမယ့္ MJR ဟာႏိုင္ငံေရးေလာကထဲကိုဝင္ၿပီးေနာက္သူ႔ရဲ႕ပုံရိပ္ထိခိုက္မွာစိုးတဲ့အတြက္ဂ်ာရာနဲ႔လက္တြဲျဖဳတ္ခဲ့ပါေတာ့တယ္ ႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္သူတို႔ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္ကြဲရတာလို႔ယုံၾကည္ေနတဲ့ဂ်ာရာက ႏိုင္ငံေရးကိုအလြန္မုန္းပါတယ္ ဒါေပမယ့္လည္း MJR ဆုံးသြားၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ပါတီေနရာကိုယူဖို႔ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္ ဂ်ာရာတစ္ေယာက္ေယာက္်ားေတြနဲ႔ရင္ေဘာင္တန္းၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာကိုခက္ခက္ခဲခဲယူရဖို႔ ျပႆနာေတြနဲ႔ရင္ဆိုင္ရပုံေတြကိုအေသးစိတ္႐ိုက္ကူးျပထားတဲ့ဇာတ္ကားေကာင္းေလးတစ္ကားျဖစ္ပါတယ္ Review – Phyu Sin File Size – 2.4GB,1.3GB Format…mp4 Quality :1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : Drama,Bio Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin & Hmue Encoded by Arrow
Worth (2020) (App member only) ##unicode အမေရိကန်ကမ္ဘာ့ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးစင်တာကိုအကြမ်းဖက်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့ 9/11 တိုက်ခိုက်မှုကိုအားလုံးမှတ်မိကြမှာပါ လူပေါင်းမြောက်များစွာသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်အဖြစ်အပျက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ဒီဇာတ်ကားကတော့ ၂၀၀၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြီးမှာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့သူတွေရဲ့ ကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေကိုနစ်နာကြေးပေးပြီး ကူညီဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ရှေ့နေတစ်ယောက်အကြောင်းကို ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတာပါ ကန်နက်ဖန်းဘာ့ခ်ဟာနာမည်ကြီးရှေ့နေတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူမနိုင်တဲ့အမှုဆိုတာမရှိသလောက်ပါပဲ နစ်နာကြေးပေးအပ်မယ့်အစီအစဉ်ကိုဖန်းဘာ့ခ်တစ်ယောက်ကူညီမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒါပေမယ့်လူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ကိုငွေကြေးဘယ်လောက်နဲ့တန်ဖိုးဖြတ်ရမလဲဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ရတာဟာမလွယ်ကူပါဘူး ကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေကလည်း သေဆုံးသွားတဲ့မိသားစုတွေကိုငွေကြေးအစားထိုးမယ်ဆိုတာက လက်မခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်နေပါတယ် ဖန်းဘာ့ခ်တစ်ယောက်အခက်အခဲတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းသွားမလဲ နစ်နာကြေးပေးအပ်မယ့်အစီအစဉ်ကရော အောင်မြင်နိုင်ပါ့မလား ဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော် ##zawgyi အေမရိကန္ကမာၻ႔ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာကိုအၾကမ္းဖက္ေတြတိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကတဲ့ 9/11 တိုက္ခိုက္မႈကိုအားလုံးမွတ္မိၾကမွာပါ လူေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာေသဆုံးခဲ့ရတဲ့ ထိတ္လန႔္တုန္လႈပ္ဖြယ္အျဖစ္အပ်က္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ ဒီဇာတ္ကားကေတာ့ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္မွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဒီတိုက္ခိုက္မႈႀကီးမွာအသက္ဆုံးရႈံးခဲ့ရတဲ့သူေတြရဲ႕ က်န္ရစ္သူမိသားစုေတြကိုနစ္နာေၾကးေပးၿပီး ကူညီဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္အေၾကာင္းကို ႐ိုက္ကူးတင္ဆက္ထားတာပါ ကန္နက္ဖန္းဘာ့ခ္ဟာနာမည္ႀကီးေရွ႕ေနတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး သူမႏိုင္တဲ့အမႈဆိုတာမရွိသေလာက္ပါပဲ နစ္နာေၾကးေပးအပ္မယ့္အစီအစဥ္ကိုဖန္းဘာ့ခ္တစ္ေယာက္ကူညီမယ္ဆိုၿပီးဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္ ဒါေပမယ့္လူတစ္ေယာက္ရဲ႕အသက္ကိုေငြေၾကးဘယ္ေလာက္နဲ႔တန္ဖိုးျဖတ္ရမလဲဆိုတာကို ဆုံးျဖတ္ရတာဟာမလြယ္ကူပါဘူး က်န္ရစ္သူမိသားစုေတြကလည္း ေသဆုံးသြားတဲ့မိသားစုေတြကိုေငြေၾကးအစားထိုးမယ္ဆိုတာက လက္မခံႏိုင္ဖြယ္ျဖစ္ေနပါတယ္ ဖန္းဘာ့ခ္တစ္ေယာက္အခက္အခဲေတြကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းသြားမလဲ နစ္နာေၾကးေပးအပ္မယ့္အစီအစဥ္ကေရာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါ့မလား ဆိုတာကိုေတာ့ ဇာတ္လမ္းထဲမွာဆက္လက္ၾကည့္ရႈလိုက္ၾကပါဦးေနာ္ Review – Phyu Sin File Size – 2.4GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL Genre : Bio,History,Drama Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin Encoded ...
IMDB: 6.3/10 470 votes
Shershaah (2021) ##unicode ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ အိန္ဒိယဖြစ်ရပ်မှန်စစ်ကားလေးတစ်ကားကိုရွေးချယ်ထားပါတယ် ၁၉၉၉ ခုနှစ်လောက်တုန်းကအိန္ဒိယပါကစ္စတန်ကြား ကတ်ရှ်မီးယားဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကာဂျေးစစ်ပွဲမှာ အသက်ကိုစတေးပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက် အောင်ပွဲကိုယူပေးခဲ့တဲ့ ကပ္ပတိန်ဗစ်ကရမ်ဘတ်တရာရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းကိုရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ဗိုလ်ကြီးဗစ်ကရမ်ဘတ်တရာဟာ သာမန်ကျောင်းဆရာမိဘတွေကမွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပေမယ့် ငယ်စဉ်ကတည်းကအမိမြေအတွက်တာဝန်ကျေတဲ့စစ်သားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့အိပ်မက်ရှိသူဖြစ်ခဲ့ပါတယ် နောက်ဆုံးအထိလည်းသူ့ရဲ့အိပ်မက်ကိုဆုပ်ကိုင်ပြီးအကောင်အထည်ဖော်သွားခဲ့တဲ့လေးစားစရာလူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ဗိုလ်ကြီးဗစ်ကရမ်ရဲ့ရဲစွမ်းသတ္တိ စစ်သားကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့အရည်အချင်းတွေကိုပေါ်လွင်အောင်ရိုက်ကူးပြထားတဲ့အပြင် သူ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းအပြည့်အစုံကိုပါ တင်ပြထားတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်လို့ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ အိႏၵိယျဖစ္ရပ္မွန္စစ္ကားေလးတစ္ကားကိုေ႐ြးခ်ယ္ထားပါတယ္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ေလာက္တုန္းကအိႏၵိယပါကစၥတန္ၾကား ကတ္ရွ္မီးယားေဒသမွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ကာေဂ်းစစ္ပြဲမွာ အသက္ကိုစေတးၿပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံအတြက္ ေအာင္ပြဲကိုယူေပးခဲ့တဲ့ ကပၸတိန္ဗစ္ကရမ္ဘတ္တရာရဲ႕ ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းကို႐ိုက္ကူးပုံေဖာ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္ ဗိုလ္ႀကီးဗစ္ကရမ္ဘတ္တရာဟာ သာမန္ေက်ာင္းဆရာမိဘေတြကေမြးဖြားလာခဲ့တဲ့သူျဖစ္ေပမယ့္ ငယ္စဥ္ကတည္းကအမိေျမအတြက္တာဝန္ေက်တဲ့စစ္သားေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္တဲ့အိပ္မက္ရွိသူျဖစ္ခဲ့ပါတယ္ ေနာက္ဆုံးအထိလည္းသူ႔ရဲ႕အိပ္မက္ကိုဆုပ္ကိုင္ၿပီးအေကာင္အထည္ေဖာ္သြားခဲ့တဲ့ေလးစားစရာလူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္ ဗိုလ္ႀကီးဗစ္ကရမ္ရဲ႕ရဲစြမ္းသတၱိ စစ္သားေကာင္းတစ္ေယာက္ရဲ႕အရည္အခ်င္းေတြကိုေပၚလြင္ေအာင္႐ိုက္ကူးျပထားတဲ့အျပင္ သူ႔ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းအျပည့္အစုံကိုပါ တင္ျပထားတဲ့ဇာတ္ကားေကာင္းတစ္ကားျဖစ္လို႔ၾကည့္ရႈလိုက္ၾကပါဦးေနာ္ Review – Phyu Sin File Size – 1.4GB,2.8GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : Action ,Bio,Drama Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin & Hmue Encoded by Arrow
Joe Bell (2020) ##unicode ဒီတစ်ခါကတော့ မင်းသား Mark Robert ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းလေတစ်ပုဒ်တင်ဆက်ပေးပါ့မယ်။ ဇာတ်လမ်းနာမည်အတိုင်း ဂျိုးဘဲလ်ဆိုတဲ့ လူကြီးတစ်ယောက်အကြောင်းပေါ့။ သူက အမေရိကတိုက်အနောက်ပိုင်းက အောရီဂန်ဆိုတဲ့မြို့လေးကနေ အမေရိကတိုက်အရှေ့ပိုင်းက နယူးယောက်မြို့အထိ မိုင်ပေါင်း ၂၇၀၀ ကျော်ကို လမ်းလျှောက်ပြီးသွားနေတာပါ။ သူဒီလိုလမ်းလျှောက်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ ဂေးတွေကိုလူတွေအနိုင်ကျင့်ကြတာမျိုးတွေ မလုပ်ကြဖို့၊ ဒါဟာဘယ်လောက်နာကျင်ရကြောင်း လမ်းမှာတွေ့တဲ့လူတိုင်းကို ဟောပြောပေးသွားဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပါ။ သူ့ဘေးမှာ သူ့သားလေးဂျေဒင်လည်း အဖော်ပါလာပါတယ်။ သူတို့သားအဖနှစ်ယောက် လမ်းလျှောက်လာကြရင်းကနေ နောက်ကြောင်းကိုပြန်ပြောကြတဲ့ပုံစံလေးသွားထားပါတယ်။ တကယ်တော့ ဂျေဒင်ကဂေးတစ်ယောက်ပါ။ ဂျေဒင်က သူကျောင်းမှာအနိုင်ကျင့်ခံရကြောင်း သူ့အဖေ့ကိုပြောပြခဲ့ပေမဲ့ ဂျိုးဘဲလ်ကတော့ သိပ်အရေးတယူကြီးလုပ်မနေခဲ့ပါဘူး။ ဒါတောင်မှ ဂျိုးဘဲလ်အနေနဲ့ သူ့သားဂေးဖြစ်နေတာကို သဘောမကျလှပေမဲ့ လက်ခံပေးထားတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်။ ဒီလိုကနေ အနိုင်ကျင့်မှုတွေပိုပြီးဆိုးလာတဲ့အခါမှတော့ ဂျေဒင်တစ်ယောက်ဒါတွေကို သည်းခံနိုင်ဦးမှာလား၊ သူတို့သားအဖ လမ်းလျှောက်ဖို့အခြေအနေကိုရော ဘယ်လိုရောက်လာခဲ့တာလဲ၊ သူတို့ရဲ့ပန်းတိုင် နယူးယောက်အထိရော ရောက်နိုင်ဦးမှာလားဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းလေးထဲမှာ ခံစားကြည့်ရှုပေးကြပါဦး။ ဂေးတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုတစ်ကွက်စာလောက်လေးမြင်နိုင်ပြီး မိသားစုကြားက နားလည်မှုနဲ့ချစ်ခြင်းတရားတွေရဲ့ တန်ဖိုးကိုပါ နားလည်ခံစားရစေတဲ့ ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ ##zawgyi ဒီတစ္ခါကေတာ့ မင္းသား Mark Robert ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ ျဖစ္ရပ္မွန္ဇာတ္လမ္းေလတစ္ပုဒ္တင္ဆက္ေပးပါ့မယ္။ ဇာတ္လမ္းနာမည္အတိုင္း ဂ်ိဳးဘဲလ္ဆိုတဲ့ လူႀကီးတစ္ေယာက္အေၾကာင္းေပါ့။ သူက အေမရိကတိုက္အေနာက္ပိုင္းက ေအာရီဂန္ဆိုတဲ့ၿမိဳ႕ေလးကေန အေမရိကတိုက္အေရွ႕ပိုင္းက နယူးေယာက္ၿမိဳ႕အထိ မိုင္ေပါင္း ၂၇၀၀ ...
IMDB: 5.4/10 554 votes
The Heist of the Century (2021) ##unicode ဒီတစ်ခါတော့ ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါ့မယ်။ "ရာစုနှစ်ရဲ့ခိုးမှု"လို့ ဟိုးလေးတကျော်ဖြစ်သွားတဲ့ ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဘန်ကိုရီယိုဘဏ်ခွဲတစ်ခုကို လူခြောက်ယောက်ပါတဲ့ အဖွဲ့တစ်ခုက သေနတ်အတုတွေနဲ့ ဓားပြဝင်တိုက်ပြီး ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာနဲ့ ကျောက်မျက်ရတနာတွေယူသွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ကို အခြေခံရိုက်ကူးထားတာပါ။ ဒီဓားပြမှုကို ဦးဆောင်သူကတော့ ဖာနန်ဒိုဆိုတဲ့ ဆေးသမားပါးပါ။ သူကဆေးသမားဆိုပေမဲ့ ဗဟုသုတစုံပြီး ဉာဏ်လည်းထက်ပါတယ်။ သူ့အစီအစဉ်အတွက် လိုအပ်လောက်မယ့်သူတွေကို လိုက်စုပြီးတော့ ရာစုနှစ်ရဲ့ခိုးမှုကြီးကို ကျူးလွန်ဖို့ကြံရွယ်ခဲ့တာပါ။ သူတို့ရဲ့ပြစ်မှုကို ရာစုနှစ်ရဲ့ခိုးမှုလို့တောင် တင်စားရလောက်တဲ့အထိဆိုတော့ ဘယ်လိုတွေများကြံစည်ပြီး ဘဏ်ထဲကပစ္စည်းတွေကို ခိုးထုတ်ကြတာလဲ။ ခိုးပြီးတော့ရော ဘေးကင်းကင်းနဲ့ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နိုင်မှာလားဆိုတာကို ဇာတ်လမ်းလေးထဲမှာခံစားကြည့်ရှုပေးပါဦး။ ##zawgyi ဒီတစ္ခါေတာ့ ျဖစ္ရပ္မွန္ကိုအေျခခံ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္ကိုတင္ဆက္ေပးပါ့မယ္။ "ရာစုႏွစ္ရဲ႕ခိုးမႈ"လို႔ ဟိုးေလးတေက်ာ္ျဖစ္သြားတဲ့ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဘန္ကိုရီယိုဘဏ္ခြဲတစ္ခုကို လူေျခာက္ေယာက္ပါတဲ့ အဖြဲ႕တစ္ခုက ေသနတ္အတုေတြနဲ႔ ဓားျပဝင္တိုက္ၿပီး ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြယူသြားခဲ့တဲ့ျဖစ္ရပ္ကို အေျခခံ႐ိုက္ကူးထားတာပါ။ ဒီဓားျပမႈကို ဦးေဆာင္သူကေတာ့ ဖာနန္ဒိုဆိုတဲ့ ေဆးသမားပါးပါ။ သူကေဆးသမားဆိုေပမဲ့ ဗဟုသုတစုံၿပီး ဉာဏ္လည္းထက္ပါတယ္။ သူ႔အစီအစဥ္အတြက္ လိုအပ္ေလာက္မယ့္သူေတြကို လိုက္စုၿပီးေတာ့ ရာစုႏွစ္ရဲ႕ခိုးမႈႀကီးကို က်ဴးလြန္ဖို႔ႀကံ႐ြယ္ခဲ့တာပါ။ သူတို႔ရဲ႕ျပစ္မႈကို ရာစုႏွစ္ရဲ႕ခိုးမႈလို႔ေတာင္ တင္စားရေလာက္တဲ့အထိဆိုေတာ့ ဘယ္လိုေတြမ်ားႀကံစည္ၿပီး ဘဏ္ထဲကပစၥည္းေတြကို ခိုးထုတ္ၾကတာလဲ။ ခိုးၿပီးေတာ့ေရာ ေဘးကင္းကင္းနဲ႔ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ႏိုင္မွာလားဆိုတာကို ဇာတ္လမ္းေလးထဲမွာခံစားၾကည့္ရႈေပးပါဦး။ Review – Yue Liang File ...
IMDB: 7.2/10 5,879 votes
The Heist of the Century (2021)
Malik (2021) ##unicode Malik ဇာတ်ကားမှာတော့ Aliဆိုတဲ့ကောင်လေးက Ramdapallyဆိုတဲ့ပင်လယ်ကမ်းစပ်မြို့လေးမှာကြီးပြင်းလာသူတစ်ယောက်ပေါ့။ အဲ့ကမ်းစပ်က မူဆလင်နဲ့ ခရစ်ယာန်မျိုးနွယ်စုက လူတွေအတူတူနေထိုင်ကြတဲ့ မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ Aliအရွယ်ရောက်လာတော့ ဆင်းရဲလှတဲ့သူတို့မြို့လေးကို တိုးတက်အောင် လုပ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ Aliတစ်ယောက် ခရစ်ယာန်ဖြစ်သူ သူငယ်ချင်း Davidနဲ့ပူးပေါင်းကာ မူဆလင်ဘုရားကျောင်းရှေ့က အမှိုက်ပုံကြီးကိုရှင်းလင်းပြီး မြို့အတွက် ကျောင်းတစ်ကျောင်းတည်ဆောက်ပေးခဲ့တယ်။ Aliဟာ Ramdapallyရဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးလိုဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့ အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ကာ သူတို့ကမ်းစပ်မြို့လေးကိုကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ Aliက အစိုးရအတွက် ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုဖြစ်လာတာမို့ အစိုးရက မျိုးနွယ်စု၂ခုကြား အဓိကရုဏ်းကို ဖန်တီးကာ Aliကို အပြစ်တင်ဖမ်းဆီးလိုက်ခဲ့တယ်။အာဏာပိုင်တွေက Aliကို ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ ၁၄ရက်အတွင်း ထောင်ထဲမှာ သဘာဝအတိုင်းသေဆုံးသွားသလို သတ်ဖို့ အမိန့်ပေးထားတဲ့အတွက် ရဲတွေက Aliကိုသတ်ဖို့လူကို လိုက်ရှာရတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ Ramdapallyကလူတွေ ဘယ်သူကမှ Aliကိုသတ်ရဲတဲ့သတ္တိမရှိကြဘူး။ဒီလိုနဲ့ ရဲတွေဟာ Aliရဲ့တူဖြစ်သူ Davidရဲ့ သား Frandiကို ရှာတွေ့သွားပြီး Aliကိုသတ်ဖို့ အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။မျိုးနွယ်စု၂စုကြားက ရန်ငြိုးတွေကို လက်စားချေဖို့ Frandiတစ်ယောက်က ဦးလေးဖြစ်သူ Aliကို သတ်နိုင်မလားဆိုတာ ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi Malik ဇာတ္ကားမွာေတာ့ Aliဆိုတဲ့ေကာင္ေလးက Ramdapallyဆိုတဲ့ပင္လယ္ကမ္းစပ္ၿမိဳ႕ေလးမွာႀကီးျပင္းလာသူတစ္ေယာက္ေပါ့။ အဲ့ကမ္းစပ္က မူဆလင္နဲ႔ ...
Dog Day Afternoon (1975) ##unicode ဒီတစ်ခါတော့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဘဏ်ဓားပြတိုက်မှုတစ်ခုကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ ၁၉၇၅ ခုနှစ်က ဇာတ်လမ်းဟောင်း၊ ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို တင်ဆက်ပေးပါ့မယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ နေ့လည်ခင်းတစ်ခုမှာ ဘရွတ်ကလင်းကဘဏ်တစ်ခုကို လူ ၃ ယောက်က သေနတ်တွေနဲ့ ဓားပြဝင်တိုက်ပါတော့တယ်။ ဘဏ်ထဲမှာ မန်နေဂျာနဲ့ အစောင့်ကလွဲရင် ကျန်တာက အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေပါ။ ဘဏ်ဝန်ထမ်းတွေကို သေနတ်နဲ့ချိန်ပြီး ခြိမ်းခြောက်နေတုန်းမှာပဲ ဓားပြတွေထဲကတစ်ယောက်က မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးထွက်သွားပါတယ်။ ကျန်ခဲ့တဲ့ ဆွန်နီနဲ့ ဆယ်တို့လည်း ပိုက်ဆံတွေယူပြီး မြန်မြန်ထွက်သွားဖို့ပြင်ကြပါတယ်။ ကံဆိုးစွာနဲ့ပဲ ဘဏ်မှာပိုက်ဆံက သိပ်မရှိတော့တဲ့အပြင် ရဲတွေပါဘဏ်ကိုလာဝိုင်းပါတော့တယ်။ စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာတဲ့အခါမှာတော့ ဆွန်နီနဲ့ဆယ်တို့လည်း လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက် ဘဏ်ဝန်ထမ်းတွေကို ဓားစာခံလုပ်လိုက်ရပါတော့တယ်။ ဆွန်နဲ့အယ်တို့ ဘဏ်ထဲကနေထွက်သွားနိုင်မှာလား၊ ဓားစာခံတွေရော ဘေးကင်းကင်းနဲ့ လွတ်မြောက်နိုင်မှာလား၊ သူတို့ဓားပြတိုက်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကရော ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းလေးထဲမှာ ခံစားကြည့်ရှုပေးပါဦး။ ##zawgyi ဒီတစ္ခါေတာ့ ျဖစ္ရပ္မွန္ဘဏ္ဓားျပတိုက္မႈတစ္ခုကို ျပန္လည္႐ိုက္ကူးတင္ဆက္ထားတဲ့ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္က ဇာတ္လမ္းေဟာင္း၊ ဇာတ္လမ္းေကာင္းေလးတစ္ပုဒ္ကို တင္ဆက္ေပးပါ့မယ္။ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ ေန႔လည္ခင္းတစ္ခုမွာ ဘ႐ြတ္ကလင္းကဘဏ္တစ္ခုကို လူ ၃ ေယာက္က ေသနတ္ေတြနဲ႔ ဓားျပဝင္တိုက္ပါေတာ့တယ္။ ဘဏ္ထဲမွာ မန္ေနဂ်ာနဲ႔ အေစာင့္ကလြဲရင္ က်န္တာက အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းေတြပါ။ ဘဏ္ဝန္ထမ္းေတြကို ေသနတ္နဲ႔ခ်ိန္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ေနတုန္းမွာပဲ ဓားျပေတြထဲကတစ္ေယာက္က မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုၿပီးထြက္သြားပါတယ္။ က်န္ခဲ့တဲ့ ...
IMDB: 8.0/10 240,197 votes